Ny vadiny ihany no nandetika azy: lehilahy iray nahatrarana fitomboka hosoka maro | NewsMada
Ny vadiny ihany no nandetika azy: lehilahy iray nahatrarana fitomboka hosoka maro
Nosamborin’ny polisy, teny Andraisoro ny faran’ny herinandro teo ny lehilahy iray sy ny namany, nahatrarana fitomboka ara-panjakana hosoka maromaro tao an-tranony. Tsy iza no nandetika azy fa ramatoa vadiny ihany.
Raha ny fanazavan’ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria eny Antaninandro (CSP3), niantso azy ireo noho ny daroka sy ny vono ataom-badiny azy ny renim-pianakaviana iray. Tsy vitan’izay fa mampiahiahy azy koa ny asam-badiny ka nahatonga azy nampilaza haingana any amin’ny polisy momba ity vadiny ity. Tonga haingana teny an-toerana ny polisy ka efa mamo ilay raim-pianakaviana vadin’ity renim-pianakaviana nametraka fitoriana. Efa tsy nahatsiaro tena intsony ity raim-pianakaviana ity tamin’ny fotoana nahatongavan’ny polisy. Nohamafisim-badiny tamin’ny polisy koa fa manana fitomboka maromaro ity vadiny ity izay tsy fantany mazava ho ataom-badiny inona satria tsy izany rahateo ny asany ka niteraka ny ahiahy eo aminy.
Amin’ny anaran’olona ambony…
Rehefa nojerena ireo fitomboka hosoka ireo, hita fa efa niasa sy hosoka avokoa. Mbola hita tao an-tranony ihany koa, nandritra ny fisavana nataon’ny polisy, ny lehilahy iray mpiara-miasa amin’ity vadiny ity. Samy noraofin’ny polisy nankany amin’ny kaomisaria hanaovana fanadihadiana izy roa lahy ireto. Hita tao amin’ilay raim-pianakaviana vadin’ilay ramatoa teo amin’ireo fitomboka nandritra ny fitsirihana nataon’ny polisy ny anaran’olona ambony ary sampan’asa maro eto an-dRenivohitra. Tsy mety milaza ny antony itazonan’izy ireo fitomboka ara-panjakana izy roa lahy tratra ireto nandritra ny fanadihadiana nataon’ny polisy. Natolotra ny fampanoavana avy hatrany ireto jiolahy ireto taorian’ny famotorana nataon’ny polisy. Tsy vao izao ny nahitana olona manao hosoka amin’ny alalan’ireny fitombokase hosoka misy anaran’olona ambony eto amin’ny firenena ireny, zary lasa paikady entin’ireo jiolahy isolokiana olona indray aza ny fampiasana azy ireny.